नेपाल आज | ‘छक्का पञ्जा-३’को आक्रामक व्यापार, २ दिनमै २ करोड !
‘छक्का पञ्जा-३’को आक्रामक व्यापार, २ दिनमै २ करोड !
शुक्रबार, २६ असोज २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘छक्का पञ्जा-३’ ले आक्रामक व्यापार गरेको छ । यस वर्षकै प्रतिक्षित चलचित्रका रुपमा हेरिएको यो चलचित्रले धेरै दर्शकको माया पाइरहेको छ । चलचित्र घटस्थापनाका दिनदेखि प्रदर्शनमा आएको छ ।
चलचित्रले रिलिजको पहिलो दिनमा नै १ करोड ३० लाखको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको बताइएको छ । बुधबारबाट नै देशैभरका अधिकांश हलहरुमा हाउसफूलको व्यापार गरेको गरिरहेको बताइएको छ ।
रिलिजको दोश्रो दिन बिहीबार पनि चलचित्रको व्यापार सोचेअनुरुप नै भएको बताइएको छ । दोश्रो दिन चलचित्रले ८० लाखमाथिको व्यापार गरेको चलचित्रका निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरीले जानकारी दिए । दुई दिनको व्यापारलाई हेर्ने हो भने चलचित्रले झण्डै २ करोड ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ ।
आमा सरस्वती मुभिज प्रालिको ब्यानरमा निर्माण भएका यसअघिका चलचित्रहरुलाई सन्देशविहीन भएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर यस पटक भने चलचित्रमा मनोरञ्जनसँगै गतिलो विषयवस्तुको समेत उठान गरिएको छ ।
यसपटक उठान गरिएको विषयवस्तुलाई दर्शकले रुचाएका छन् । चलचित्रले सरकारी विद्यालयले शिक्षामा गरिरहेको लापर्वाहीलाई उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।
शुक्रबार पनि उपत्यकाका अधिकांश मल्टिप्लेक्स हलहरु हाउसफुल रहेको बताइएको छ । आजको तुलनामा शनिबारका लागि आक्रामक रुपमा चलचित्रको अग्रिम टिकट बुकिङ भइरहेको निर्देशक दीपाश्री निरौलाले बताइन् ।
चलचित्रमा दीपकराज गिरी, दीपिका प्रसाई, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, बुद्धि तामाङ, लक्ष्मी गिरी, निर शाहलगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । चलचित्रमा प्रियंका कार्की, सन्जोग कोइराला, स्वस्तिमा खड्का, वर्षा राउतलगायतका कलाकारहरुको समेत विशेष भूमिका रहेको छ ।
नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जा-३
'गर्भपतन गर्न भगवानले बनाएका छन् नपुंसक, बरू भियग्रा ब्यान्ड गरियोस्'
दीपक मनाङे बने फिल्म निर्माता, चलचित्रको नाम ‘पोइ पर्‍यो काले’
पूनमले ह्वाट्सएप नम्बर शेयर गर्दै फ्यानलाई दिन यस्तो निम्तो